Tag: halis | Martech Zone
Khatar intee le'eg ayey leedahaye Towrkaaga Teknolojiyada?
Axad, Sebtembar 23, 2018 Axad, Sebtembar 23, 2018 Lindsay Tjepkema
Saameyn intee le'eg ayay noqon doontaa haddii munaaraddaada tiknoolajiyaddu ay dhulka ku soo dhacayso? Waa fikrad igu dhacday dhowr Sabti ka hor maadaama caruurtaydu ciyaarayeen Jenga intii aan ka shaqeynayay soo bandhigid cusub oo ku saabsan sababta ay suuqleyda uga fikirayaan xirmooyinka tiknoolajiyadooda. Waxay igu dhacday in xirmooyinka tiknoolajiyada iyo munaaradaha Jenga runti ay wax badan wadaagaan. Jenga, dabcan, waxaa lagu ciyaaraa iyadoo lagu uruurinayo alwaaxyo alwaax ah illaa gebi ahaantiis
Khamiista, Oktoobar 22, 2015 Jimco, Oktoobar 23, 2015 Douglas Karr
Xayeysiinta Dijitaalka ah waxay u badan tahay inay noqoto kharashka ugu sarreeya ee xayeysiinta warbaahinta sannadka 2016 sida ku cad comScore. Taasi waxay sidoo kale ka dhigeysaa bartilmaameed aan la diidi karin oo loogu talagalay khayaanada gujinta. Xaqiiqdii, sida ku xusan warbixin cusub oo ku saabsan khayaanada warshadaha xayeysiinta ee internetka, saddex meelood meel dhammaan kharashyada xayeysiinta waxaa lagu khasaarin doonaa khayaano. Shabakadaha Distil iyo Xafiiska Xayeysiinta ee Isdhexgalka (IAB) ayaa soo saaray Tilmaamaha Daabacayaasha Dijitaalka ah ee Qiyaasta iyo yareynta Bot Traffic, warbixin maanta baareysa.
Waxaa jiray dadyow waddanka oo dhan oo neefta ka qaaday markay arkeen daahfurka Shuttle si guul leh loo bilaabay. Waxaa jira kuwa rumaysan in balaayiin doolar oo lagu kharash gareeyay barnaamijka hawada sare ay tahay uun qashin aad u badan oo lacag ah. Waan kari waayey inbadan. Sida bilowgan ugu dambeeya, dejinta yoolal aan macquul aheyn in la gaaro ayaa ah waxa nagu kicinaya hal-abuurnimada iyo horumarka. Barnaamijka booska waa mid ka mid ah barnaamijyadaas